Olee otú Kọwaa History si gam akporo ekwentị mkpanaaka na
Ọ bụrụ na anyị na-akpọ aha otu ihe na ghọrọ praịm ihe na ịga nke ọma nke smart ntị, ọ ga-doro anya na-abụ ha nwere ike jikọọ onye ọrụ na internet na ọ laa. Ọ bụghị naanị na smart igwe emewo Njikọta mfe ha onwe ha aided ndị ọrụ a ukwuu na sọọfụ internet na eme nchọgharị ha mmasị weebụsaịtị n'ebe ọ bụla ha bụ. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, ị na-akọrọ onye android ekwentị ma ọ bụ bụ nanị maara nke onye na-aga site na gị nchọgharị akụkọ ihe mere ị ga-mkpa ikpochapụ gị nchọgharị data bụla ugbu a na mgbe ahụ.
Enyere gị aka imeta mgbaru ọsọ a, na-esonụ na-ewe gị site a zuru ezu, nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na wepụ nchọgharị akụkọ ihe mere si dị iche iche dị iche iche ihe nchọgharị weebụ. Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ maka bụla nchọgharị ị na-eji na ị ga-ọma na-aga.
Ikpochapụ Nchọgharị History si Google Chrome maka Android
Ọ bụrụ na ị na-eji Mozilla Firefox na gị android ngwaọrụ njinji maka gị niile nchọgharị mkpa na mkpa iji wepụ ya nchọgharị akụkọ ihe mere, na-eso ndị a:
1. Launch Mozilla Firefox na gị android ngwaọrụ na emeghe menu site na ịme ọpịpị bọtịnụ na atọ ntụpọ na ya emi odude ke n'elu aka nri nke ihuenyo.
2. Gaa "Nzuzo na Nche" site ọzọ menu na-egosi ma họrọ "Doro Anya Private Data". Ọzọ menu ga-emeghe elu na nhọrọ metụtara data nwechapụ. Họrọ ndị na kwado gị mkpa na enweta "Clear Data".
3. Chọpụta bọtịnụ akara "Clear Nchọgharị Data" na enweta ya.
4. A mmapụta menu ga-apụta na nhọrọ nke ihe na ị nwere ike họrọ ihichapụ ma ọ bụ na-. Lelee igbe megide chọrọ ihe na enweta "Doro Anya." Ọ bụrụ na Otú ọ dị, ị gbanwere uche gị mgbata "Kagbuo" na ị nwere ike n'enweghị aga azụ.
5. ọzọ mmapụta menu ga-apụta ịgwa gị na akụkọ ihe mere eme nwechapụ usoro bụ underway.
Ikpochapụ Nchọgharị History si Mozilla Firefox maka Android
Ikpochapụ nchọgharị akụkọ ihe mere si Opera na gị android ngwaọrụ, gaba dị ka eduzi n'okpuru:
1. Launch Opera nchọgharị na gị android ngwaọrụ. Kpatụ O ekara button na a nsoroụzọ ala aro nri na-esote ya. Site dobe ala menu na-emepe, họrọ "Mwube" na-aga "Nzuzo". A menu ga-apụta na dị iche iche nhọrọ metụtara ekpocha eme nchọgharị data. Họrọ niile ma ọ bụ ụfọdụ otu otu, dabeere na gị chọrọ.
2. A ákwà ga-apụta. Ịnyagharịa "Advanced" ma họrọ "Nzuzo".
Ikpochapụ Nchọgharị History si Opera maka Android
Ikpochapụ akụkọ ihe mere eme na-eme nchọgharị si Chrome maka Android bụ mara mma n'ụzọ kwụ ọtọ. Nanị na-eso nzọụkwụ kwuru n'okpuru ebe a:
1. Ẹkedori ke Google Chrome nchọgharị na gị android ngwaọrụ na enweta na bọtịnụ na n'elu nri akuku nke ihuenyo na atọ ntụpọ na ya. Site dobe ala menu, họrọ "History".
Ikpochapụ Nchọgharị History si dolphin maka Android
2. Site mmapụta menu na-egosi, họrọ ụdị nke data na ị chọrọ iji wepụ na gaba site ọkụkụ "Wepụ" button. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-eme na mgbe mgbe, nanị họrọ "Unu na-ajụ m ọzọ" nhọrọ nakwa n'ihu na ịpị ụzọ ọpụpụ. Ọ ga-akpaghị aka na-echeta gị oke maka ọdịnihu akwụkwọ.
Ikpochapụ Stock Nchọgharị History na Android
Ndị na-android igwe nwere android 4.0 ma ọ bụ mbụ ga-enwe na-wuru ngwaahịa nchọgharị kpọrọ dị ka internet. Ikpochapụ akụkọ ihe mere eme site na nke a na ngwaahịa nchọgharị, na-eso ndị ntụziaka:
1. Gaa menu nke gị ngwaahịa nchọgharị na si dobe ala menu na-emepe, họrọ "Mwube". Mgbe ahụ gaa "Nzuzo Ntọala" site na ihuenyo na-eso na-emeghe akụkọ ihe mere eme nwechapụ nhọrọ.
2. Dị ka kwa gị mkpa, họrọ otu ma ọ niile nke nyere nhọrọ otu otu ikpochapụ eme nchọgharị data gị ngwaahịa nchọgharị na gị android ngwaọrụ.
Ikpochapụ Search History na Android
Ikpochapụ search akụkọ ihe mere eme, ẹkedori google search wijetị na gaba dị ka eduzi n'okpuru:
1. Kpatụ button akara na atọ edoghi na n'elu n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo nri n'azụ Google logo.
2. Site mmịfe menu na-emepe, họrọ "Mwube". A na ihuenyo ga-emeghe elu na ọtụtụ dị iche iche nhọrọ na ya. Na-aga "Accounts na Nzuzo".
3. Gaa "" Google Akaụntụ History "si na ihuenyo na-eso wee họrọ" Web & App Arụ Ọrụ "ndị na-esonụ na ihuenyo.
4. ọzọ ihuenyo ga-emeghe elu. Gaa na ala nke ihuenyo aka ịchọta "Jikwaa Arụ Ọrụ" button na pịa ya.
5. Kpatụ gear ekara akara ngosi na ala n'aka nri nke ihuenyo. Ọ ga-emeghe elu a menu aha dị ka "History". Họrọ "Wepụ ihe".
6. Họrọ ihe na ị chọrọ ịnọgide na dabeere na oge na nke ha na-eje ozi. Iji hichapụ ihe niile nke ọchụchọ gị akụkọ ihe mere eme dị mfe họrọ "site ná mmalite na oge" na enweta na "Wepụ" button.
Mfe Ụzọ Kọwaa Space on iPhone
Olee otú ị na Doro Anya All Data site na iPhone
> Resource> Clean-elu> Olee otú iji Kọwaa History si gam akporo ekwentị mkpanaaka na